I-Recipe yeast yeaven for the pies
Ukupheka imvubelo inhlama Imvubelo emnandi kakhulu yeepes! Kulula ukusebenza kunye, kusemhlabeni wonke-kufanelekile kwiipeya kunye nokugxilwa okunomsoco. Ama-pie alungeleyo eyenziwe yile nghlama ithambileyo, i-airy, enobuncwane obuhle, kwaye ibhakawa ngokukhawuleza! Olu vavanyo lwanele ama-pie angama-25!
Imvubelo eyomileyo 20 g
Ukhula umfula 1 kg
Ubisi 0.5 ilitha
Amaqanda enkukhu 4 ama-pcs.
Ioli ye-Sunflower engagqitywanga ioli 220 ml
Inyathelo 1 Ukulungiswa kwemvubelo yenhlama yamapayi sidinga umgubo wengqolowa, imvubelo eyomileyo, ioli ejongene nelanga, inkukhu yenkukhu, ubisi, ityuwa, iswekile.
Inyathelo 2 Vulela u-0.5 izindebe zobisi, uthele imvubelo eyomileyo kunye nepunipoyi yeshukela kuyo.
Inyathelo 3 Gxuma kwaye ushiye kwindawo efudumeleyo imizuzu eyi-15-20.
Inyathelo 4 Ubisi olusele lusefudumala, luqhuba amaqanda kuwo kwaye luthulule kwi-gum.
Inyathelo 5 Hlanganisa ne-corolla.
Inyathelo 6 Ukucoca ishukela eseleyo, ityuwa, ioli yeoli yelanga.
Inyathelo 7 Hlanganisa uphinde uthele umqolo weengqolowa.
Isinyathelo 8 Sixolela inhlama, songeza kancane umgubo otsala.
Inyathelo 9 Ekugqibeleni, sifanele sifumane intlama egcina ubume bhola elithambileyo, ingabi nzima, ilula emva kwezandla. Gubungela isitya kunye novavanyo kunye nethayile ecocekileyo uze ushiye ihora kunye nesiqingatha kwindawo efudumeleyo.
Inyathelo 10 Inhlama iphuma kakuhle ngokuvakalayo.
Inyathelo 11 Mlungise ngokukhawuleza ngesandla sakhe kumaphiko onke, gubungela isitya kunye nethawula uze uyibuyisele kwindawo efudumeleyo imizuzu engama-40.
Inyathelo 12 Inhlama yafika okwesibini.
Isinyathelo 13 Phinda ujike ngokukhawuleza kwaye uqale ukubunjwa kunye neebhoyi zokubhaka kunye naluphi na ukuzaliswa kwintetho yakho!
Ama-pancakes aseHungary ngentliziyo
Umntwana we-easter muffins
Isidlo sasekuseni ebhedini okanye indlela yokuqalisa ukusa
Ukutya okunomsoco okuphekwe kwibheyili
Ungayifumana njani indlela yakho yeempahla?
Ukusebenzisa i-oxygen cosmetics
Okroshka kunye neebhere